Ikhaya leHobbit elithobekileyo elinendawo entle yokubuka iMt. Kinabalu - I-Airbnb
Ikhaya leHobbit elithobekileyo elinendawo entle yokubuka iMt. Kinabalu
Indlu eyenziwe ngomhlaba sinombuki zindwendwe onguFairuz
Ikhaya lethu leHobbit elithobekileyo linikezelwe kubalandeli beHobbit kunye neNkosi yeeRings, singasathethi ke ngabantu abanomdla, abathanda indalo. Ibekwe kwidolophu yaseKundasang, edume ngabakhenkethi abandwendwela iNtaba yaseKinabalu kunye nezinto ezikufutshane. Yindawo yokuphumla, ukuvuselela kunye namava okuphila phantsi-kuya-emhlabeni ngokufanelekileyo kwiNtaba yaseKinabalu, eyona ntaba iphakamileyo eMzantsi-mpuma Asia. Khawube nomfanekiso wakho uvuka uye kumbono opheleleyo weNtaba, kanye ecaleni kwebhedi yakho. Indawo entle yeepaksi ezi-5.
Ikhaya leHobbit elithobekileyo lakhiwa ukusuka kwisiqalo esithobekileyo. Izinto ezininzi zifumaneka ngokwendalo. Sizama konke okusemandleni ethu ukugxininisa imvakalelo yendalo kuyilo lwethu ngelixa singabeki esichengeni ubumnandi kunye nokufikeleleka. Uninzi lweendwendwe zethu ziyonwabela imbonakalo entle, ukuhlala kamnandi, kunye nentuthuzelo kunye nexesha lokuxabisa imozulu epholileyo, imbonakalo entle yentaba kunye nefoto yokufota.
Sibanjwe kwipropati enezinye iindawo, ngoko indawo yokupaka yabelwana nezinye iindwendwe. Nangona kunjalo, iKhaya leHobbit elithobekileyo liyunithi yodwa kwaye ivumela iindwendwe indawo yazo yabucala. Kukho i-mini pantry yokulungiselela ukutya kunye negadi yelitye ngaphandle ukonwabela umbono wentaba ngelixa ufudumele malunga nomlilo.
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, ibhedi elala umntu omnye eyi-1
4.77 · Izimvo eziyi-40
IKundasang yidolophu ekwisithili saseRanau eSabah, eMalaysia elele ecaleni kweNtili yaseKundasang. Ime malunga neekhilomitha ezi-6 ukusuka eKinabalu National Park, iikhilomitha ezili-12 ukusuka kwidolophu yaseRanau kwaye idume ngentengiso yemifuno evulwa iintsuku ezisixhenxe ngeveki. Yeyona dolophu ikufutshane kwiNtaba yaseKinabalu kwaye inombono wepanorama weNtaba. Kumphakamo ophantse ube yi-1,900m (6,200ft), yeyona ndawo iphakamileyo yokuhlala eMalaysia. Zininzi iindawo ezinomdla zokutyelela eKundasang naseRanau.
I-Kundasang kunye nedolophu yaseNabalu, apho nganye inemarike ithengisa iintlobo ngeentlobo zemifuno kunye neziqhamo ezivela egadini. Ukongeza, imisebenzi yezandla kunye nokutya kwemveli kwasekhaya kuyathengiswa kwezi marike. IMarike yaseKundasang yimizuzu emi-3 kuphela ukusuka kwi-B-Inspired Abode kunye ne-Nabalu Handicraft Market malunga nemizuzu engama-20 ukusuka kuthi.
I-Kinabalu Park yindawo efanelekileyo yokuqala yabakhweli abafuna ukunyuka iNtaba yaseKinabalu. Kule ndawo, abakhweli banokwenza ubhaliso, babhale isikhokelo sentaba ngelixa besonwabela umoya omtsha, amaqondo obushushu apholileyo kunye nembonakalo entle yeNtaba yaseKinabalu. Kwiindwendwe ezinganqweneli ukunyuka intaba, banokuza apha ukuze bafumane umva weNtaba yeKinabalu, baphumle kwaye banandiphe amaqondo okushisa abandayo, okanye batyelele iGadi yeBotanical kunye neziko lomboniso elibonisa imbali yeKundasang neRanau. Yimizuzu eyi-8 ukusuka kwi-B-Inspired Abode.
I-Kundasang Mount Valley Ulonwabo ngokuqinisekileyo kuyonwabisa iintsapho kunye nokuhlangana kwakhona kwezihlobo. Inemisebenzi emininzi yosapho lonke – ukusukela kwiflying fox, B.E. I-Wonderland, i-archiry kunye nefama yemivundla.
I-Kundasang War Memorial libhotwe elincinci elihlala isikhumbuzo sokukhumbula amajoni ase-Australia kunye namaBritane abanjwe ngumkhosi waseJapan ngexesha leMfazwe Yehlabathi II. Le ndawo idume nge-Marching Death scene eye yabulala ngaphezu kwe-2,000 yamajoni ase-Australia. Apha, iindwendwe ziyakwazi kakuhle malunga nebali lezi ziganeko ngokusebenzisa inkcazo yevidiyo ebanzi, kwaye inokuthatha ifoto yeentyatyambo ezintle kunye neendawo ezibukekayo. Yimizuzu emi-2 ukusuka kwi-B-Inspired Abode.
I-DESA Cattle Dairy Farm yifama kunye nomzi-mveliso wokwenza ubisi wenkomo neebhokhwe. Ibekwe malunga neekhilomitha ezisibhozo ukusuka ePekan Kundasang. Le fama ivulelwa abakhenkethi ukuze babone ukwenziwa kobisi kananjalo nokubakhuthaza ukuba bathenge iimveliso kulemizi-mveliso. Imbonakalo yonke kunye nomoya ubonakala useNew Zealand, ngoko ke le fama iye yabizwa ngokuba "yiNew Zealand encinci eSabah". Ungathenga iyogathi entsha, i-ayisikrimu kunye nobisi lobisi olwenziwe yiDESA ngokwayo. Abantwana banokukonwabela ukuzibamba nokutyisa iinkomo neebhokhwe. Yimizuzu eyi-8 kuphela ukusuka kwi-B-Inspired Abode.
I-Sabah Tea Garden kuphela kwamasimi eti e-organic e-Borneo kunye nohlobo lwayo ehlabathini. Apha iindwendwe zinokufumana ulwazi kunye namava malunga namasimi eti. Phakathi kwezinto ezinokwenziwa apha ziquka ukutyelela amasimi eti ephilayo, ukubona ukulungiswa kweti kunye nokuthenga iintlobo ngeentlobo zeemveliso kwezi fama. Ungeniso mahala. Yiyure enye ukusuka kwi-B-Inspired Abode.
IPoring Hot Springs yindawo yabakhenkethi edume kakhulu phakathi kwabantu balapha eSabah kunye nabangaphandle. Amanzi ashushu aveliswa ngokwemvelo phantsi komhlaba kwaye aqulethe isulfure enokuthi ihlaziye umzimba wakho. Le ndawo ikwayaziwa ngenxa yeendawo ezinomtsalane ezikufuphi ezifana neKipungit Waterfall, iButterfly Park, iCanopy Bridge, kunye nentyatyambo yeRafflesia. Yiyure enye ukusuka kwi-B-Inspired Abode.
Umbuki zindwendwe ngu- Fairuz
Sihlala kwiyunithi ekufuphi kufutshane neKhaya leHobbit eHumble kwaye sihlala sifumaneka ukunceda iindwendwe ngayo nayiphi na indlela esinokuyenza ngayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kundasang